Akora Douglas C-117D FSX & P3D - Rikoooo
Mpanoratra: Ny mods dia mifototra amin'ny Jan Visser (ekipa DIGITAL DAKOTA WORKS) C-47 fonosana. Models notontosain'i Manfred Jahn, sary avy amin'i Gordon (gman) Madison sy Nick Cooper, fanandramana nataon'i Alan G. Ampolsk sy Ralf Scholten. Fikarohana ara-tantara voalohany nataon'i John D
Ity fanontam-pirinty ity dia manampy fomba fiasa fanombohana, fitantanana auto-mix, lisitry ny interactive, VC chatter ary ny Panel 'Monitor' amin'ny VC indray. Ny mods dia mifototra amin'ny Jan Visser (ekipa DIGITAL DAKOTA WORKS) C-47 fonosana. Misaotra ny mpanoratra ho an'ity asa goavana ity.
Tantara an-tsoratra. Ao amin'ny boky Flight Officiel, ny C-117D dia nofaritana ho "fiaramanidina midadasika sy ambany, izay natao ho ampiasaina ho karazana fiara samihafa, mpiasa na fiara mpitondra fiara."
Teo am-piandohana dia niantoka ny fanoloana DC-3, ny Super 3 dia nanana rofia lavalava, motera matanjaka mahery kokoa, kodiarana amin'ny rambony, rindrina boribory lava volo ary elanelana lehibe sy lavaka. Raha toa ka afaka mitondra fiara bebe kokoa amin'ny haingam-pandeha haingana kokoa sy lava kokoa izy io, dia tsy nahitana fifaninanana ho an'ny fiaramanidina vaovao tahaka ny Convair 240. Iray telo Super 3 ihany no niasa tamin'ny Capital Airlines tany Washington DC.
Na dia izany aza, marobe an-tapitrisa US sy Marines Super 3 dia nahita serivisy manerantany tamin'ny alàlan'ny anarana R4D-8 (taona voalohany) sy C-117D (1962). Ny miaramila C-117D farany dia nesorina tsy ampiasaina amin'ny volana 1982. Olona sivily vitsivitsy Super 3s dia mbola eo am-panafana amin'izao fotoana izao.